Hadalladii Isburinayey Ee Uu Trump Ka Yidhi Fayraska Korona | Gaaroodi News
Hadalladii Isburinayey Ee Uu Trump Ka Yidhi Fayraska Korona
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, iyo afadiisa Melania ayaa laga helay fayraska korona oo haatan karantiimo galay.
Madaxweyne Trump waa 74 jir, waana dadka da’daas ah dadka halista weyn ugu jira fayraska korona. In cudurku ku dhacay madaxweynaha iyo afadiisa waxa uu Trump ku shaaciyey bogga uu ku leeyahay shabakadda Twitter-ka, hase yeeshee waxa kale oo uu ku qoray “waanu ka bogsan doonaa”.
Maraykanku haatan waa dalka koobaad ee dunida laga helay tirada ugu badan ee dadka uu ku dhacay fayraska korona. Laakiin Madaxweyne Trump wuxuu hore ugu nuuxnuuxsaday in uu si haboon oo fiican wax uga qabtay.
Bal hadaba aan dib ugu noqono hadallo door ahaa oo uu ka yidhi cudurkan iyo jiritaankiisa ba.
22 Jeeniweri, markaas oo qofkii ugu horeeyey ee Maraykan ah ee uu cudurku ku dhaco la xaqiiyey,ayaa waxa uu Trump yidhi:
“Gebi ahaan ba waan xakamaynay cudurka. Waa qof keliya oo Shiinaha ka yimid waanan la tacaalaynayaa. Wax weyni dhici maayaan oo arintu caadi bay ahayn doontaa”
9 Maarij ayaa Trump waxa uu ku sheegay korona fayrasku in aanu ka duwanayn oo uu la mid yahay uun hargabka caadiga ah.
“Markaa ugu yaraan 37,000 oo Maraykan ah ayaa u dhintay hargab caadi ah. celcelis ahaan sannadkii waxa u dhinta inta u dhaxaysa 27,000 iyo 70,000. Meel la xidhay ma jirto, noloshii iyo dhaqaaluhuba way socdaan… arintaa ha u daymo la’aanina” ayuu yidhi.
31 Maarij ayuu hadana mar kale ka hadlay oo uu sheegay in fayraska korona aanu ahayn hargab caadi ah ee uu hore ugu sheegay.
“Hargab maaha. Waa dilaa. Markaad qof Isbitaalka geyso ee aad maca salaama ku kala tagtaan ayaa lagu kordhayaa, waaba qofkii oo aad moodo inuu sii gaboobay oo culays badani fuulay. Subaxa xigta markaad wacdo isbitaalka ee aad damacdo inaad ogaato sida xaalkiisu yahay ayaad ogaanaysaaba inuu koomo galay. Waxani hargab caadi ah maaha” ayuu yidhi.
Khubarada caafimaadka ee Maraykanka iyo dunida guud ahaan ba waxay markii cudurku faafay ku taliyeen in dadku xidhaan Mask-ka afka iyo sanka lagu xidho ee lagaga gaashaanto fayraska. Hase yeeshee Trump muddo ayuu arintaa diidanaa oo aanu aqbalin xataa in isagu xidho Mask-ka.
3 Abril, ayaa madaxweyne Trump oo in muddo hore loogu dhaliilayey inuu diiday in uu gashado Mask-ka, ayaa kama dambaystii aqbalay inuu xidho.
“Marka aan ka hadlayno Mask-ka, arintu qasab maaha. Waad xidhan kartaa hadaad doontona waad iska dayn kartaa. Anigu se waxaan go’aansaday inaan gashado laakiin dadka qaarkood waxa dhici karta in aanay doonayn wax lagula yaabayona maaha arintaasi”.
21 Juulaay, ayaa Trump waxa weyn ka bedelay mawqifkiisii ahaa in xidhashada Masku tahay wax ikhtiyaarka qofka ku xidhan oo uu sheegay in ay tahay lagama marmaan in dadku gashadaan.
”Waxaan qof kasta faraynaa inuu xidho Mask marka uu joogo goob dad badani iskugu yimaadeen. Mask-ka ha la xidho, gashada Mask-ka” ayuu yidhi.
10 Sebtember, ayaa Donald Trump hadana sheegay in laga adkaan karo safmarka oo talaal la diyaarinayaa gabogabo ku dhaw yahay.
”Waxaanu ku dhownahay gabogabadii lagu cidhib tiri lahaa cudurka, waxyaabo badan oo fiicanna way socdaan oo ah talaal iyo qaab kale oo lagula tacaali karo dhibtiisa”.
Markaa maadaama oo hadalladaa badan ee is burinaya hore looga hayey Madaxweyne Trump, wax lala yaabo kuma ay noqon shacabka Maraykanka iyo dunida ba in fayraska korona aad loogaga hadlo doodii madaxtooyada ee dhex martay Trump iyo ninka la loolamaya ee Joe Biden.
Arimaha kale ee lagu dhaliilay Madaxweyne Trump ee ku saabsan fayraska korona waxa ka mid ah:
Tirada dadka dhintay oo uu dhayalsaday
Waxa aad loogu dhaliilay in uu bilowgii dhayalsaday tirada dadka u dhintay cudurka oo uu sheegay in marka tirada dadka Maraykanka ah ee u dhintay cudurta la barbar dhigo dalalka kale inta ka dhimatay ay tahay wax aan sidaa u badnayn.
“Dalkeenu wuxuu ka mid yahay wadamada tirada dadka u dhintay cudurku ay aad u yartahay” ayuu yidhi, in kasta oo Maraykanku ka mid ahaa wadamada dhimashadu ugu badan tahay dunida.
In uu “isku dayey inuu dhaqaalaha ka joojiyo” xarunta ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada Maraykanka ee CDC
Xarunta ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada ee Maraykanka CDC oo ah hay’ad dawladeed oo u xil saaran daryeelka caafimaadka dadweynaha ee Marayknka, ayaa muran dhex galay iyada iyo madaxweynaha intii safmarkani dilaacay oo wuxuu ka soo diiday xeerarkii xakamaynta fayraska ee ay xaruntu soo rogtay kana mid ahayd in xayiraado lagu soo rogo dalka.
Musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada kula loolamaya, Joe Biden, ayaa arintaa ku dhaleeceyey Trump oo bishii July ku qoray Twitter-ka hadal uu ku dhaliilayo isaga oo aan caddayn iyo faahfaahin toona bixin.Hase yeeshee Aqalka Cad ayaa arintaa beeniyey in Trump dhaqaale ka horjoogsaday xarunta waxaanu sheegay in “eedda ay soo jeediyeen kooxda Biden tahay been. Miisaaniyaddii u dambaysay xarunta CDC waa loogu kordhiyey lacag dhan 635 milyan oo doolar, taas oo u dhiganta 8%